CADEYN: Galmudug oo si adag uga jawaabtay Dhambaal uga yimi Villa Somalia, kuna dhawaaqday… – Puntlandtimes
CADEYN: Galmudug oo si adag uga jawaabtay Dhambaal uga yimi Villa Somalia, kuna dhawaaqday…
September 23, 2018 W LAASCAANO
DHUUSA-MAREEB(P-TIMES)- Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxda Galmudug ayaa si adag looga jawaabay qoraal saxaafadeed ay sheegeen in ay Madaxtooyada Soomaaliya ku dalbanaysay in Madaxda Galmudug ay tagaan Muqdisho, si xalkooda halkaas loogu gaaro.
Warsaxaafadeed ka soo baxay Madaxtooyada Galmudug ayaa lagu sheegay in aysan marnaba tageyn Muqdisho, xalka Galmudugna aysan aheyn in diyaarad la raaco, balse uu yahay in laga daayo faragalinta, lagana saaro dadka dheeriga ku ah ee kasoo horjeeda hana-qaadka maamulka.
Qoraalka Galmudug oo lagu qoray luuqad adag oo siyaasadeed, waxaa kaloo lagu sheegay in ay Galmudug ka mid tahay madasha dawlad gobaleedyada oo xariirka u jaray Dawladda Faderaalka Soomaaliya, khilaafna uusan maanta ka dhex jirin madaxda maamulkas.
Dowlad kusheega QANDUR QARAN qunjuraafa iyo qaniinyo kama daynayso shicibka iyo maamulada xalaasha ah ee somaaliyeed
Labo nin oo xidid ah ayaa xididada u siibay hamigii qarannimo ee umada somaaliyeed u han taagayeen. Wa labo nin oo qanduur ku bahoobay oo qunjuraaf billiseed lagama waayayo.